စာကကျြတဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကကျြထားတာတှပွေနျမမသှေ့ားဖို့ဒီအခကျြလေးတှကေ အထောကျကူပွု ပါလိမျ့မယျ.
(၁) Note မှတျထားပါ
Note မှတျထားခွငျးဟာအရမျးကောငျးတဲ့အလထေ့တဈခုပါ။ ဒီနရောမှာ အရေးကွီးတာက ဆရာပွောသမြှ လိုကျမှတျဖို့ မဟုတျပါဘူး အရေးကွီးတဲ့ Main point လေးတှကေိုသာ သခြောမှတျထားရမှာပါ။
တကယျလို့ လှတျသှားတာမြိုး ရှိတယျဆိုရငျ ဆရာ့ကို သခြောပွနျမေးပွီး မှတျထားပါ။ စာမေးပှဲနီးတဲ့အခါ Note မှတျထားတာတှကေ အားလုံးထကျ အသုံးဝငျနပေါလိမျ့မယျ။
(၂) နညျးပညာအတှကျ ကနျ့သတျထားပါ
နညျးပညာနဲ့ လူငယျဆိုတာ ခုခတျေမှာ ခှဲမရတဲ့ အရာတှပေါပဲ အထူးသဖွငျ့ Facebook/ Instagram/ Game ပါ။ ဒါပမေယျ့ သူ့အခြိနျနဲ့သူ ကနျ့သတျခကျြလေး ထားပေးဖို့ လိုပါတယျ။
ဥပမာ စာကွညျ့နတေဲ့ တဈနာရီအတှငျး ဖုနျးလုံးဝ မကိုငျဘူး အဲလိုမြိုးပေါ့။ Dictionary လေးပဲ ကွညျ့မှာပါ ဆိုပွီးတော့လညျး မကိုငျမိပါစနေဲ့၊ Dictionary စာအုပျတှရှေိပါတယျ။
(၃) တဈခါတညျး အမြားကွီး မကွညျ့ပါနဲ့
တဈခါတညျးနဲ့ အခြိနျအကွာကွီး စာတှေ ဆကျတိုကျကွညျ့တာ မကောငျးပါဘူး။ တဈခြို့ဆို စာမေးပှဲ နီးလာရငျ တဈညလုံး မအိပျဘဲ စာကကျြတာမြိုး လုပျတတျကွပါတယျ။
အဲလိုမြိုးမှာ စာပိုရတယျ ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျး တဈခါတညျး အမြားကွီး ကွညျ့တာက ကနျြးမာရေးကို ထိတဲ့အပွငျ စာလညျး ပိုမစေ့ပေါတယျ။
စာကကျြတာ မဟုတျရငျတောငျ ဒီနသေ့ငျတဲ့ စာတှကေို ၁၅မိနဈ ဒါမှမဟုတျ အမြားဆုံး နာရီဝကျလောကျ အခြိနျပေးပွီး ပွနျဖတျကွညျ့ပါ။ နလေ့ညျက ကိုယျသခြောနားထောငျခဲ့တဲ့ စာတှကေို ညဘကျ ဒီလိုလေး ပွနျဖတျကွညျ့လိုကျရငျ ခေါငျးထဲကို ပိုစှဲမွဲစပေါတယျ။ ဒါဆို နီးမှ ပငျပငျပနျးပနျး ကကျြနဖေို့ မလိုတော့ပါဘူး။
(၅) ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စဈဆေးပါ
စဈဆေးမှု မရှိဘဲ ရလဒျကို မသိနိုငျသလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မစဈဆေးရငျလညျး ဘာတှရေနပွေီလဲ၊ ဘာတှေ နားလညျလဲ၊ ဘယျလောကျမှတျမိလဲ မသိနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဖွဈနိုငျရငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စာမေးပှဲ စဈပေးတာမြိုး၊ မေးခှနျးမေးကွညျ့တာမြိုးလေးတှေ လုပျပေးပါ။ စာလညျး ပိုမှတျမိစပေါတယျ။
စာကွညျ့တာ တဈနာရီဆိုရငျ အနညျးဆုံး ၁၀မိနဈလောကျ အနားယူပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဦးနှောကျက ၄၅မိနဈလောကျ ကြျောလာရငျ သိပျမမှတျနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ မကွာမကွာ အနားယူပေးဖို့ လိုပါတယျ။
ဒီလို အနားယူပေးရငျ ဦးနှောကျက ပွနျလနျးဆနျးလာပွီး ကကျြတဲ့စာတှေ ခေါငျးထဲ ပိုဝငျမှာပါ။
အိပျရေးဝဖို့ကတော့ အရေးကွီးတဲ့ အရာတှထေဲကတဈခုပါ။ အိပျရေးမဝရငျ ကကျြသမြှစာ မပွေီ့း သဲထဲရသှေနျဖွဈဖို့ ရာနှုနျးမြားပါတယျ။ အိပျရေးဝမှ ဦးနှောကျလညျး ကနျြးမာ၊ စာလညျးရ၊ လူလညျးပြျော ဖွဈမှာပါ။
စာကွညျ့တဲ့အခါ မရရငျဘဲ သတေော့မလိုနဲ့ အရမျးကွီး serious ဖွဈနစေရာ မလိုပါဘူး။ ပြျောပြျောပါးပါးနဲ့ စိတျကို လှတျလှတျလပျလပျထားပွီး ကွညျ့ပါ။ ဒီလိုဆို စိတျငွိမျပွီး စာရဖို့လညျး ပိုလှယျကူမှာပါ။
အရမျး serious ဖွဈလှနျးရငျ စိတျပူပွီး ဂနာမငွိမျနဲ့ စာပိုမရ ဖွဈစပေါတယျ။
Crd; Live the Dream
အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်ကျက်ထားတဲ့စာတွေမမေ့သွားဖို့ ပါပဲ။
စာကျက်တဲ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ကျက်ထားတာတွေပြန်မမေ့သွားဖို့ ဒီအချက်လေးတွေက အထောက်ကူပြု ပါလိမ့်မယ်.
(၁) Note မှတ်ထားပါ
Note မှတ်ထားခြင်းဟာအရမ်းကောင်းတဲ့အလေ့ထတစ်ခုပါ။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက ဆရာပြောသမျှ လိုက်မှတ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး အရေးကြီးတဲ့ Main point လေးတွေကိုသာ သေချာမှတ်ထားရမှာပါ။
တကယ်လို့ လွတ်သွားတာမျိုး ရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာ့ကို သေချာပြန်မေးပြီး မှတ်ထားပါ။ စာမေးပွဲနီးတဲ့အခါ Note မှတ်ထားတာတွေက အားလုံးထက် အသုံးဝင်နေပါလ်ိမ့်မယ်။
(၂) နည်းပညာအတွက် ကန့်သတ်ထားပါ
နည်းပညာနဲ့ လူငယ်ဆိုတာ ခုခေတ်မှာ ခွဲမရတဲ့ အရာတွေပါပဲ အထူးသဖြင့် Facebook/ Instagram/ Game ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့အချိန်နဲ့သူ ကန့်သတ်ချက်လေး ထားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဥပမာ စာကြည့်နေတဲ့ တစ်နာရီအတွင်း ဖုန်းလုံးဝ မကိုင်ဘူး အဲလိုမျိုးပေါ့။ Dictionary လေးပဲ ကြည့်မှာပါ ဆိုပြီးတော့လည်း မကိုင်မိပါစေနဲ့၊ Dictionary စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။
(၃) တစ်ခါတည်း အများကြီး မကြည့်ပါနဲ့
တစ်ခါတည်းနဲ့ အချိန်အကြာကြီး စာတွေ ဆက်တိုက်ကြည့်တာ မကောင်းပါဘူး။ တစ်ချို့ဆို စာမေးပွဲ နီးလာရင် တစ်ညလုံး မအိပ်ဘဲ စာကျက်တာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
အဲလိုမျိုးမှာ စာပိုရတယ် ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်း တစ်ခါတည်း အများကြီး ကြည့်တာက ကျန်းမာရေးကို ထိတဲ့အပြင် စာလည်း ပိုမေ့စေပါတယ်။
စာကျက်တာ မဟုတ်ရင်တောင် ဒီနေ့သင်တဲ့ စာတွေကို ၁၅မိနစ် ဒါမှမဟုတ် အများဆုံး နာရီဝက်လောက် အချိန်ပေးပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ နေ့လည်က ကိုယ်သေချာနားထောင်ခဲ့တဲ့ စာတွေကို ညဘက် ဒီလိုလေး ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ခေါင်းထဲကို ပိုစွဲမြဲစေပါတယ်။ ဒါဆို နီးမှ ပင်ပင်ပန်းပန်း ကျက်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
(၅) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စစ်ဆေးပါ
စစ်ဆေးမှု မရှိဘဲ ရလဒ်ကို မသိနိုင်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မစစ်ဆေးရင်လည်း ဘာတွေရနေပြီလဲ၊ ဘာတွေ နားလည်လဲ၊ ဘယ်လောက်မှတ်မိလဲ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စာမေးပွဲ စစ်ပေးတာမျိုး၊ မေးခွန်းမေးကြည့်တာမျိုးလေးတွေ လုပ်ပေးပါ။ စာလည်း ပိုမှတ်မိစေပါတယ်။
စာကြည့်တာ တစ်နာရီဆိုရင် အနည်းဆုံး ၁၀မိနစ်လောက် အနားယူပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်က ၄၅မိနစ်လောက် ကျော်လာရင် သိပ်မမှတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မကြာမကြာ အနားယူပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလို အနားယူပေးရင် ဦးနှောက်က ပြန်လန်းဆန်းလာပြီး ကျက်တဲ့စာတွေ ခေါင်းထဲ ပိုဝင်မှာပါ။
အိပ်ရေးဝဖို့ကတော့ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ အိပ်ရေးမ၀ရင် ကျက်သမျှစာ မေ့ပြီး သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းများပါတယ်။ အိပ်ရေးဝမှ ဦးနှောက်လည်း ကျန်းမာ၊ စာလည်းရ၊ လူလည်းပျော် ဖြစ်မှာပါ။
စာကြည့်တဲ့အခါ မရရင်ဘဲ သေတော့မလိုနဲ့ အရမ်းကြီး serious ဖြစ်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ စိတ်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားပြီး ကြည့်ပါ။ ဒီလိုဆို စိတ်ငြိမ်ပြီး စာရဖို့လည်း ပိုလွယ်ကူမှာပါ။
အရမ်း serious ဖြစ်လွန်းရင် စိတ်ပူပြီး ဂနာမငြိမ်နဲ့ စာပိုမရ ဖြစ်စေပါတယ်။
Read times Last modified on Saturday, 14 March 2020 15:55
"ဘာသာစကားပေါင်း (၅၁) ဘာသာ ကို အခမဲ့ လေ့လာလို့ရမယ့် Loecsen”